के स्थायी कपाल हटाउन तथ्य हो कि घोटाला? -ट्याक्निकल जानकारी-शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
स्थायी कपाल हटाउनु तथ्य हो वा घोटाला?
समय: 2020-11-05 हिट्स: 4
धेरै कपाल हटाउने उपकरण मध्ये, अधिक र अधिक व्यक्ति घर कपाल हटाउने उपकरण छनौट गर्दछन्। मूल्य उच्च छैन र यो प्रयोग गर्न हाम्रो लागि उपयुक्त छ, तर कपाल हटाउने उपकरणले स्थायी कपाल हटाउने को प्रभाव साँच्चै प्राप्त गर्न सक्छ?
धेरै व्यक्तिहरूलाई लेजर कपाल हटाउने बारे गलतफहमी हुन्छ, यो सोच्दै कि यो एक पटक गरे पछि बढ्नेछैन, त्यसोभए के वर्तमान लेजर कपाल हटाउने उपकरणले स्थायी कपाल हटाउन सक्दछ? अर्को, लेजर कपाल हटाउने उपकरणले कसरी काम गर्दछ हेरौं, र यसले एकै पटकमा स्थायी कपाल हटाउने प्रक्रिया प्राप्त गर्न सक्छ कि हेरौं।
सबै भन्दा पहिले, हामीले लेजर कपाल हटाउने उपकरणले कपाल हटाउने कार्य कसरी गर्ने बुझ्नु पर्दछ। संक्षेपमा, यसले लेजरलाई कडा हटाउनको लागि स्थितिमा विशिष्ट तरंगदैर्ध्यको साथ इरेडियेट गर्दछ। लेजरले छालाको एपिडर्मल लेयरमा कपालको कपालसम्म पुग्न सक्दछ र कपालको फोलिकल नष्ट गर्दछ, ताकि कपालको पुन: निर्माण गर्ने क्षमता स्थायी हुन्छ र स्थायी कपाल हटाउन प्राप्त गर्दछ।
किनभने मानव कपालको पनि वृद्धि चक्र हुन्छ, यो मुख्यतया तीन चरणमा विभाजित हुन्छ: वृद्धि चरण, रिग्रेशन चरण, र बाँकी अवधि। प्रत्येक दिन, पुरानो कपाल प्राकृतिक रूपले झर्नेछ, र नयाँ कपाल बिस्तारै बढ्नेछ। किनकि कपाल झर्दै गएको र कपाल बढ्नको मात्रा लगभग सन्तुलित छ, यस्तो देखिन्छ कि कपालको मात्रा सँधै यति धेरै हुन्छ, तर वास्तवमा केही केशका कणहरू बाँकी अवधिमा हुन्छन् र कपाल देखा पर्नको कुनै घटना हुँदैन। ।
लेजर कपाल हटाउन को लागी मुख्य रूप मा विकास चरण मा कपाल को लागी प्रभावित गर्दछ, र यो मूल रुपमा डिजेनेरेटिव र आराम चरणहरु मा कपाल को लागी अप्रभावी हो। तपाईंले कपालको यस भागको लागि उपचारको अगाडि अर्को विकास चरणमा कुर्नु पर्छ। यो कपाल विकास चरणमा प्रवेश गर्दछ चक्रीय प्रक्रिया, एक पछि अर्को, सँगै बढ्नुको सट्टा। तसर्थ, लेजर कपाल हटाउन सामान्यतया राम्रो कपाल हटाउने प्रभाव प्राप्त गर्न 3-5 उपचार वा अधिक आवश्यक पर्दछ।
यो याद गर्नुपर्दछ कि कपाल हटाउने उपकरणको गुणस्तर फरक हुन्छ, र ग्यारेन्टी गरिएको गुण सहित कपाल हटाउने यन्त्रको चयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। यदि तपाईं सस्तो केहि खरीद गर्नुहुन्छ तर गुणस्तर पर्याप्त छैन भने, केवल कपाल हटाउने प्रभाव राम्रो छैन, तर यसले साइड इफेक्टहरू पनि ल्याउन सक्छ।
र क्लिनिकल भनेको स्थायी डेपिलाइट हो भनेको केशलाई अब बढ्न नदिनु हो। यो होइन कि तिनीहरू एक प्रयोग पछि बढ्न कहिल्यै। यस गलतफहमीलाई वेवास्ता गरे पछि, तपाईको कपाल हटाउने उपकरण प्रभावकारी छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु स्वाभाविक हो।
अर्को: केश हटाउने उपकरण खरीद गर्दा ध्यान के दिने